ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အဖြူအမဲ၊ နွံထဲကကြာနဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်”
very nice post. worth reading.
နွံထဲက ကြာ...ဘာကို ပမာဖွဲ့ ချင်သလဲ..စဉ်းစားတုန်း..
ကပ်ကြီးတွေ အဖန်လည် နေတဲ့ သဘော သာ မှန်ရိုး ဆိုရင်.. ကျမ်းစာထဲက.. မီးနဲ့ ကမ္ဘာပျက်ကိန်းသာ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်.. နွံထဲက ကြာ ထက်.. မီးပုံထဲက..ဖီးနစ်ငှက် က..ပို ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါ့..ကိုပေါရေ..း)
နောက်အနှစ် (၂၀) အကောင်းမြင်ဝါဒဘယ်လို ထားထား ဘာဖြစ်လာမလဲ ကြိုခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်.. အခုချိန်ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ သဘာဝဘေးတွေ၊ ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေ၊ အနာရောဂါတွေ၊ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေရဲ့ ပြောင်းလဲ လာတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေ..
ကမ္တာကြီး နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်ဖို့နီးကပ်လာတာ အမှန်ဘဲ...
နောင်အနှစ် နှစ်ဆယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုပေါမျှော်လင့်သလိုပဲ ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
တက်စာကို အဆိုတင်သွင်းထားတဲ့အတိုင်း ၂ရက်အတွင်း ပြန်ကျလာလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုပေါရေ။ :D
ကမ္ဘာကြီးက ဒဏ်ရာဗလပွနဲ့ ဖြစ်နေရတဲ့အထဲမှာ လူသားမျိုးနွယ်တွေကောင်းကျိုး နေနေသာသာ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ ကောင်းကျိုးအတွက်ကိုတောင်မှ အာဏာဖက်တွယ်ရူးနေသူတွေက တံခါးပိတ်နေကြသေးတယ်။
ကိုပေါနဲ့ထပ်တူ ဆန္ဒပြု ဆုမွန်တောင်းပါတယ်။ အနှစ်နှစ်ဆယ်အကြာမှာ ကြာပန်းလေးတွေ ရေလယ်မှာတင့်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်နိုင်ရာ နိုင်ရာလေးတွေလည်း လုပ်ကြတာပေါ့။
ကိုပေါရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ထားရစ်ခဲ့ချင်တဲ့ အမွေအဖြစ်နေမယ်… ဒီအမွေကို ပေးနိုင်လောက်အောင် ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ မျိုးစေ့ချခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်… လို့ တွေးသွားပါတယ်။ Vision to Mission ပေါ့…။ ကိုပေါရဲ့ စိမ်းလဲ့ကန်သာ ပရောဂျက်အောင်မြင်ပါစေ…။
လက်တဖျစ်မှာ ကုဋေတစ်သိန်းဖြစ်ပြီး ပျက်တယ်လေ..
မသိဘူးလား.. ဒါလေးကိုတောင်.. :P
အိမ်မက် ကမ္ဘာလေးထဲက မနိုးသေးဘူးကိုး..